“Anigu waxaan ahay ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee Afrikaan ah taariikhda” – Samuel Eto’o – Gool FM
“Anigu waxaan ahay ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee Afrikaan ah taariikhda” – Samuel Eto’o
(Afrika) 01 Nof 2019. In kasta uusan ku guuleysanin abaalmarinta Ballon d’Or muddadii uu ciyaarayay kubadda cagta, haddana halyeeyga reer Cameroon wuxuu dareensan yahay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiicnaa ee Afrika taariikhda.
Weeraryahankii hore ee kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ee Samuel Eto’o ayaa shaaca ka qaaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu fiicanaa Afrika ee taariikhda.
38-jirkan ayaa ku soo qaatay mustaqbal wanaagsan xirfaddiisa ciyaareed ee kubadda cagta, wuxuu ku guuleystay 18 koob waaweyn oo ay ku jiraan saddex jeer tartanka Champions League ah iyo labo jeer oo koobka qarammada Afrika ah iyo sidoo kale Biladda dahabka ee Olombikada.
Samuel Eto’o ayaa afar jeer loo magacaabay xiddiga sanadka ee Afrika, laakiin wuxuu ku fashilmay inuu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or, wuxuuna markii ugu fiicneyd ee xiddiga ugu fiican Adduunka ragga ee FIFA oo uu u tartamo uu kaga dhammeystay kaalinta saddexaad sanadkii 2005.
Ronaldinho oo Samuel Eto’o iyo Frank Lampard ku garaacay abaal-marinta FIFA World Player of the Year award sanadkii 2005.
Eto’o wuxuu aaminsan yahay inuu ahaa cayaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda Africa, marka loo eego horumarkiisa inta uu u ciyaarayay dalkiisa iyo kooxihii kala duwanaa ee uu soo maray.
Xiddigii hore kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ee Samuel Eto’o ayaa u sheegay Wakaaladda wararka AFP:
“Uma baahni inaan wax uun sheegto ee waa xaqiiq, haddii aad aqbasho iyo haddii kaleba, waa xaqiiqo”.
“Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay aragtidiisa, waad ogtahay, Afrikaan ahaan, in marwalba nalagu xukumo, waxa aan la aqbali karin ayaa ah in dadkii ugu horreeyay ee sameeya ay had iyo jeer ahaayeen Afrikaan, waxba igama qaadi karaan, maxaa yeelay waxaan ku faanayaa inaan ahay Afrikaan”.
“Markaan eego meesha aan ka imid iyo illaa inta aan gaaray, nafteyda waxaan u sheegaa inaan xaq u leeyahay inaan faani karo”.
Manchester United oo dharbaaxo xoog leh bisha Janaayo la damacsan Kooxda Juventus
“Waxaan rabaa inaan ku daydo Sergio Aguero” – Gabriel Jesus